Urea Crea UA - Waxqabadka KelyahaⅠ Qalabka degdegga ah ee degdegga ah ee tijaabada daryeelka-Sinocare
Urea Crea UA - Shaqada KelyahaⅠ Qalabka Rag Reagent
[emailka waa la ilaaliyay] Qalabka Urea / Creatinine / Uric Acid Reagent Kit waxaa loogu talagalay in tiro ahaan lagu ogaado urea, creatinine (Crea) iyo uric acid (UA) ee ku jirta serum-ka aadanaha. Caafimaad ahaan, waxaa badanaa loo isticmaalaa la socodka shaqada kelyaha.
Urea waa sheyga ugu dambeeya ee burburka dheef-shiid kiimikaad ee borotiinnada ku jira jirka aadanaha. Waxaa lagu soosaaraa beerka waxaana laga qaadaa inta badan kellida kadib. Qiyaasta Urea ee serum waa tilmaame muhiim u ah qiimeynta daaweynta ee shaqada kelyaha.
Creatinine waa sheyga wasakhda loo yaqaan 'creatine metabolized in muruqa', waxaana jirka looga nadiifiyaa kilyaha. Heerarka sare ee creatinine-ka dhiigga badanaa waa digniin ku saabsan cillad ama hawl gab kelyaha ah. Creatinine-ka dhiigu waa tilmaame isbarbardhiga saxda ah oo ka tarjumaya dhaawaca dhabta ah ee kilyaha, isku soo ururinta creatinine ee dhiiga ayaa sidaas ah tilmaame muhiim ah qiimeynta shaqada kelyaha.
UA waa badeecada ugu dambeysa ee burburka dheef-shiid kiimikaadka, waxaana laga sifeeyaa jirka bini'aadamka iyada oo loo marayo kelyaha iyo kaadida Heer sare oo uric acid ah ayaa caadi ahaan lagu arkaa bukaanka gout. Bukaanka qaba dheef-shiid kiimikaad sare leh, sida leukemia, myeloma badan, polycythemia vera; cudurrada kalyaha sida ba'an / dabadheeraad daran, kalyaha dhagaxa, iwm., heerka uric acid ee dhiiga aad ayuu uga sareeyaa.
Kireed: 30 ~ 3000 µmol / L